FATF Yakasarudzika Nyika zvinyorwa | ruzivo rwakapihwa neMARI YEMADZIMAI
FATF Yakasarudzika Nyika Nyika Rondedzero
Yakakura-njodzi, inotariswa uye Asiri-anoshanda ekubatira masimba
Isu isu pachedu hatina isu kana kuburikidza nemasangano edu, vatinoshanda navo, vatinoshanda navo, mashauri uye nevanozvitenderedza vanobvumidza zvigadzirwa zvedu uye masevhisi kuti ashandiswe zvakananga kana zvisina kukodzera munyika dziri pasi apa.
Rondedzero yenyika dzinogara dzichigadziriswa uye kutumirwa pane chinongedzo chakataurwa pazasi.
Vadzingiriri vanogara munyika dzakanyorwa havagone kutsigirwa basa redu.
Note * FATF inotarisisa masimba ane mashoma matanho uye zviyero munzvimbo yekutarisa uye kurwisa kubvisirwa mari nekubvisa mari yemagandanga (CFT / AML) uye kuburitsa zvinyorwa zviviri zveFATF kumunhu wese uye zvinyorwa izvi zvinopihwa katatu gore rega rega. Iyo FATF's inozivisa rondedzero yenyika kune wese munhu anehurombo / asina kusimba, CFT / AML nharaunda dzakaratidza kushanda. Kubva muna Gumiguru 2018, iyo FATF yakaongorora nyika dzinopfuura makumi masere uye yazivisa pachena makumi manomwe neshanu dzayo. Kune makumi matanhatu nenomwe Nyika, makumi mashanu neshanu nyika dzakatotora matanho anofanirwa kugadzirisa kushaya simba kweCFT / AML uye dzabviswa kubva pazvakanyorwa. Source * rakqqq.org
Chii chakanakira iwe.